ဒေါင်းတမာန်: 06/14/2009 - 06/21/2009
ပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာသို့ ပြောင်းလဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမည့် KNLA
လာရီဂျေဂင် ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 18 2009 20:47 - မြန်မာစံတော်ချိန်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, June 20, 20090comments
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ခေါင်းဆောင်ဟူသည် ကျား-မ မခွဲ မည်သူမဆို ဦးညွတ်ရန်အသင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်မှု တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ယုံကြည်Friday, 19 June 2009 17:02 ကိုထွေး
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို ယခု အချိန်အထိ ယုံကြည်လျက် ရှိကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက သူမ၏ ၆၄နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အခါသမယတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့(MNDF) ဒု ဥက္ကဌ ( ၁ ) နိုင်ငွေသိမ်းက“မွန်တိုင်းရင်းသား တယောက်အနေနဲ့ သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကို အပြည့်အ၀ယုံကြည်ပါတယ်၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအပေါ်မှာ သာတူညီမျှရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားက သူ့ဆီမှာ ရှိပါ တယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းရင်းသားတို့၏ လိုလားချက်များကို သိရှိရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပင်လုံ ညီလာခံကဲ့သို့ ညီလာခံတခု ကျင်းပပြီး ဌာနခွဲဝေမှုကို ပြန်လည် စိစစ်၍ ပြေပြေလည်လည် လုပ်ဆောင်ပါက တိုင်းရင်းသား ညီညွှတ်ရေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည့်အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က“တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လိုလားခံစားချက်ကို သူက နားလည်တယ်၊ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီးတော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ထူထောင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောလည်း ပြောတယ် ယုံလည်း ယုံကြည် တယ်၊ တိုင်းရင်သားတွေကို စည်းရုံးဖို့ သက်သက် မဟုတ်ဘဲ ပကတိ အခြေအနေက တကယ်ကို ရှိနေတယ်ဆို တာကို သူလက်ခံထားတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဦးအေးသာအောင်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (CRPP) ၏ အတွင်းရေးမှူး တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားများ၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး နားလည်မှုရှိရှိ လက်တွဲကာ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမည် ဆိုသောသဘောတရားအရ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် အချိ်န်မရွေး ဆွေးနွေးကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗမာခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ် ပြောဆိုခြင်းထက် တိုင်းပြည်၏ တကယ့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးအဖြစ်မြင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“သူက တခြား နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့မတူထူးခြားတာက ရင်ထဲကမပါဘဲ ဟန်ဆောင် စည်းရုံးရေး သက်သက် ပြောဆိုခြင်း မရှိဘူး၊ ယုံယုံကြည်ကြည် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တိုင်းရင်းသားများ အပါအ၀င် တခြားသော နိုင်ငံရေး ပါတီများကိုပါ ဆက်ဆံတာ တွေ့ရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့ မတိုင်မီ အစည်းအဝေးတွင် စစ်အစိုးရ၏ တားမြစ်ချက်ကို ဆန့််ကျင်၍ အာဇာနည် ဗိမာန်သို့ ချီတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံကိုရှေ့မှ ကိုင်ဆောင်ကာ အလံကိုင် အဖွဲ့၏နောက်တွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံဝန်းရံ၍ ချီတက်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဦးအေးသာအောင် က ပြောပြသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်က“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြာင်းအလဲဖြစ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဖြေ ရှင်း ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးသင့်တယ်”ဟုပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး ထောင်ချရန် ကြိုးစားနေသော စစ်အစိုးရသည် ကြီးမားသည့် အပြစ်တခုကို ကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက်သာမက ပိုမို ပြည့်ဝသော နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားများကို နှီးနှော ဖလှယ် နိုင်သည့် အဆင့်ရောက်ရန် လေးစားစွာလေ့လာသင့်ကြောင်း သူမ၏ မိန့်ခွန်းတခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်လည်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်
နေ့မအားညမနား ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်အနှံ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လေးစားချစ်ခင်ပြီး မြန်မာပြည် လွတ်လပ် ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အားကိုးအားထား ပြုခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း သူ့ဖခင်နည်းတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လေးစား၊ ချစ်ခင်၊ အားကိုးခြင်းကို ခံရသူ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှု အစပိုင်း ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်များနှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ် တို့တွင် မြန်မာပြည်အနှံ့ ခရီးထွက်ခဲ့ရာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ဒေသများသို့လည်း ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများက စစ်အာဏာပိုင်တို့၏ ခြိမ်းခြောက် ဟန့်တားမှုများ ကြားမှပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ယနေ့တွင် ကျရောက်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄ နှစ် မြောက်မွေးနေ့ပွဲကို ကမ္ဘာတ၀န်းလုံးရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားချစ်ခင်ကြသူများက ကျင်းပလျက်ရှိကြသည်။
Labels: ဖတ်ရန်, မျှဝေခြင်း, သတင်း
လေဒီယိုနားထောင်မရ ၊ ဖုန်းကိုင်မရ အင်း...... ဗမာပြည်
နစကမှ ဘင်္ဂလာ လက်ကိုင်ဖုံး ကိုင်ဆောင်သူများကို လိုက်လံရှာဖွေ 6/19/2009
ပြည်တွင်းထဲမှ သတင်းများ ပြည်ပ သတင်းဌာများသို့ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ဆိုသလို ပေါက်ကြားနေသဖြင့် ယနေ့နံနက်မှ စတင်ပြီး မောင်တောမြို့တွင် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လက်ကိုင်ဖုံး ကိုင်ဆောင်သူများကို ဖမ်းဆီးရန်အတွက် နစက တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အပူတပြင်း လိုက်လံ ရှာဖွေနေသည်ဟု သိရသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ တဦးက “သူတို့က ဒီကနေ့ နံနက်စပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လက်ကိုင်ဖုံး ကိုင်ဆောင်သူတွေကိ်ု ဖမ်းဆီးမယ် ဆိုပြီး ညွန်ကြားချက် ထုတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အတွင်းက လာတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းအရ နစက သတင်းပေးတွေကို နေရာ အနှံ့မှာ ချထားပြီး လက်ကိုင်ဖုံး သုံးသူတွေကို လိုက်လံ စုံစမ်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာနယ်စပ် တလျှောက်တွင် မြန်မာ ပြည်သူများ အနေဖြင့် ဈေးဈေးပေါပေါဖြင့် ရရှိသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ လက်ကိုင်ဖုံးများကို ၀ယ်ယူပြီး မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်တွင် တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံး ပြုနေကြသည်။
ထိုသို့ ဘင်္ဂလာ လက်ကိုင်ဖုံးများကြောင့် ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူ နေသဖြင့် မြန်မာနိင်ငံ အနောက်ဘက် ဒေသတွင် ဖြစ်ပျက်နေသော သတင်းများမှာ ပြည်ပ သတင်းဌာနများသို့ ချက်ချင်း ရောက်ရှိ သွားသည်ဟု သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက် ဆိုရင် တချို့ သတင်းတွေကျရင် မောင်တော အာဏာပိုင်တွေက မသိသေးဘူး။ နေပြည်တော်က အာဏာပိုင်တွေက ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာတွေကတဆင့် သိသွားပြီ။ ဒီကို လှမ်းမေးတော့ တခါတခါ မောင်တောက တာဝန်ရှိသူတွေက မဖြေနိုင်တော့ လှမ်းအဆူ ခံရတယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဘင်္ဂလာ လက်ကိုင်ဖုံးများကြောင့် အာဏာပိုင်များ၏ လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမူများမှ အစ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မူ သတင်းများကို ပြည်ပ သတင်းဌာနများက အချိန်မှီ ရရှိသွား သဖြင့် မောင်တောခရိုင် အထက် အာဏာပိုင်များက အဆို လက်ကိုင်ဖုံးများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိမ်နှင်းလိုနေသည်ဟု သိရသည်။
သို့သော် အောက်ခြေအဆင့် ၀န်ထမ်းများမှ လက်ကိုင်ဖုံးများကို ဖမ်းဆီးရမိတိုင်း အထက်သို့ မတင်ပြဘဲ ပိုင်ရှင်များထံမှ ငွေညစ်တောင်းခံလေ့ ရှိသဖြင့် အဆိုပါ လက်ကို်င်ဖုံး နှိမ်နှင်းရေးမှာ မအောင် မမြင် ဖြစ်နေရသည်ဟု သိရသည်။
ရှေးရိုး လေးမပယ်နိုင် ဒီလိုလေးဘဲ လုပ်စားနေတာကြာပေါ့
လူသတ်အစိုးရ လုံခြုံရေးအတွက် ဗမာပြည် ခြံစီးရိုးဘယ်သူစောင့်မလဲ
ဘယ်သူတွေ နယ်ခြားစောင့်ကြမလဲ မင်းချမ်း(ဘဝတက္ကသိုလ်)
နအဖစစ်အစိုးရက သေရေးရှင်ရေးသမျှ အလောတကြီးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စမှာ နအဖရဲ့နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှုကော်မတီ အကြီးအကဲ/ စရဖ ချုပ်ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကို အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားပါတီ၊ တပ်ဖွဲ့တွေက ယခင်က အားနာနေသယောင်နဲ့ ဟိုရွေ့ဒီရွေ့ အချိန်ဆွဲခဲ့ရာက နောက်ဆုံးအားမနာတမ်း“ဘူး” ခံပြလာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ခြမ်းက အင်အားကြီးမားတဲ့ UWSA ဝတပ်ဖွဲ့နဲ့ အခြားတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ နအဖတို့အနေနဲ့ မျက်ပြူးဆံပြာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ယခုဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ကလည်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ပေါက်ဖေါ်တရုတ်ဆီ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး ကိစ္စလို့ သတင်းများ လွှင့်ထုတ်နေပါတယ်။ တရုပ်နယ်စပ်က အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စကနအဖအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ဗျူဟာတစ်ရပ်ပါ။ အကဲခတ်တွေကတော့ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ကိစ္စထက် အခုတလော ကမ္ဘာ့ သတင်းလောက ထိပ်တန်းသတင်းတွေမှာ လူအများအာရုံစိုက်နေကြရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စကို ဘယ်လို
ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ပေါက်ဖေါ်တရုပ်ကြီးအနေနဲ့ ဦးစားပေးရမဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
တရုတ်ပြည်က လူအဖတ်များတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.news.qq.com ရဲ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ရေးသားချက် မှာ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာဝမ်ကျားပေါင်က မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကို မျှော်လင့်နေသည်ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း၊ ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး၊ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ စီးပွားရေး၊ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့ကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရန်အတွက် မှန်မှန် လုပ်ဆောင်ရန် လိုတယ်လို့ အဲဒီသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုတလော မြောက်ကိုးရီးယားကို အရေးယူမှုမှာ တရုတ်က အများဆန္ဒအတိုင်း လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ သဘောတူလိုက်တာတွေဟာ နအဖစစ်အစိုးရအတွက် သတိပြုစရာ အချက်တစ်ရပ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှုဆင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကိစ္စဟာလည်း စစ်အစိုးရမှာ ဖွတ်အမြီးဖွတ်လည်ပင်းကို ပြန်ပတ်မိနေတဲ့ကိန်း ဆိုက်နေတယ်ဆိုတာ မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားကြသူတိုင်း အကဲခတ်မိကြမှာပါ။ အာဆီယံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ EU၊ ကုလသမဂ္ဂတို့၊ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း၊ ဂမ်ဘာရီ၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦအောင်ကြည်တို့၊ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတို့နဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကိစ္စတွေဖေါ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ကုန်အောင် တမင်ဆွဲထားသူက နအဖပါပဲ။
ဗိုလ်ခင်ညွန့် အနေနဲ့လည်း KNU တစ်ဖွဲ့ကို အပစ်ရပ်အဖွဲ့ထဲ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်မလားဆိုပြီး စောင့်စားမျှော်ကိုးရင်း နောက်ဆုံး စစ်ထောက်လှမ်းရေး ယန္တယားတစ်ခုလုံး အဖြိုခွဲခံလိုက်ရတဲ့အထိပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်မြို့ ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။ စစ်အစိုးရဖက်တော့ KNU နဲ့ အပစ်အခတ်အောင်မြင်သွားရင် တစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတာဆောင်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဖြစ်လာမယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးအရ အားလုံးမဖြစ်မနေဆွေးနွေး အဖြေရှာရမဲ့အဆင့်ကို အလိုလိုရောက်သွားမယ်၊ ဆိုတော့ စစ်အစိုးရက ဒီအဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့ အင်မတန်ဝန်လေး နေပြီး လက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ KNU နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ စကားကမ်းလှမ်းထားဆဲ အဆင့်မှာပဲ ဆက်ပြီးထားနေရဦးမှာပဲ။
အခု စစ်အစိုးရ ဦးတည်ဖော်ဆောင်နေတာကတော့ အလုပ်ရှားပါးတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စစ်သားဦရေ ပိုများပြားလာအောင် လုပ်ဆောင်နေပုံပါပဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ကို ပါးစပ်ကသာ တဖွဖွ ရွတ်ပြနေပြီး တစ်ဖက်မှာ စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာကာ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ပြန်တိုက်ခိုင်း၊ သတ်ခိုင်းနေတာကို အခုတလော KNU နဲ့ DKBA တိုက်ပွဲတွေကသက်သေဖြစ်သလို ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလုံးဝ မပါဝင် ခဲ့ကြောင်း၊ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့စိုးရိမ်မှုကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ နအဖနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည်ချေပတဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာ အတိုင်းသားဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ နအဖတပ်ဖွဲ့ပါဝင်တာ မပါဝင် ထားပါ။ ကရင်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာကို အင်မတန်သဘောခွေ့နေပုံပါပဲ။
နဝတ၊ နအဖရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပါတီ အဖွဲ့အစည်း ၁၇ ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ လက်နက်ချအဖွဲ့များ မပါဝင်ပါ။ စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့ ထဲမှာ စစ်အစိုးရဖက်က သဘောတူညီချက်စည်းကမ်းအချို့ကို ဖောက်ဖျက်လာတဲ့အတွက် ဖိအားအမျိုးမျိုးတို့ကို မခံ မရပ်နိုင်တဲ့အဆုံး အောက်ဖေါ်ပြပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အချို့ ယခုတိုင် စစ်အစိုးရကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက် နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
၁။ ကရင်နီတိုးတက်ရေးပါတီKarenni National Progressive Party (KNPP),
၂။ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် Palaung State Liberation Army (PSLA),
၃။ သျှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ Shan State Nationalities People Liberation Organization (SNPLO),
၄။ သျှမ်းပြည်အမျိုးသားတပ်မတော် Shan State National Army (SSNA)
အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး စစ်အစိုးရကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ် ၄ ဖွဲ့ကို နအဖကအများ တကာ ပြည်သူများကိုတင်ပြရာမှာ ယခုတိုင်အပစ်ရပ်အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့ ရှိနေတယ်လို့ပဲ ဗြောင်လိမ်နေပါသေးတယ်။ ၁၃ ဖွဲ့ပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ အဘယ်ကြောင့် မဖေါ်ပြပါသလဲ။ ဘာကြောင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး ပြန်လည်ပစ်ခတ်ကြရပါသလဲ။ မည်သည့်ဖက်က ကတိသဘောတူညီမှုများ စတင်ချိုးဖောက်ခဲ့သလဲဆိုတာ ပြည်သူများ အမှန်တကယ် သိရှိသွားမှာကို စစ်အစိုးရတို့ အလွန်ပင်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းလဲရေးကို စစ်အစိုးရဆန္ဒအတိုင်း မလိုက်လျောဘဲ ခေါင်းခါငြင်းဆံနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ ကတော့ လက်ရှိအနေအထားမှာ ဒီလိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။
၁။ ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်New Democratic Army-Kachin (NDA-K)
၂။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ Kachin Independence Organization (KIO)
၃။ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ Kayan New Land Party (KNLP)
၄။ မိုင်းလားအဖွဲ့ National Democratic Alliance Army(NDAA)
၅။ ကိုးကန့်အဖွဲ့Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA)
၆။ ဝပြည်ညီညွတ်ရေးတပ်မတော် United Wa State Army (UWSA)
၇။ သျှမ်းပြည် တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း Shan State Army- North (SSA-N)
၈။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ New Mon State Party (NMSP)
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ရန် စစ်အစိုးရဖိအားပေးနေမှုကို ကိုးကန့်၊ ၀ ၊ မိုင်းလား အပစ်ရပ်အဖွဲ့တို့က စစ်အစိုးရဆန္ဒကို လက်မခံ သဘောမတူနိုင်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုထားပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) ကလည်း ငြင်းပယ်ထားပါတယ်။
KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်း ကချင်ပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒအရ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ကို နောင်တက်လာမဲ့ အစိုးရနဲ့သာ တွေ့ဆုံပြောကြားဖို့ စဉ်းစားမယ်လို့ သတင်းဌာနများကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီကလည်း ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာလကတည်းက မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အနှစ် ၅၀ ရွှေရတုသဘင်မှာ မွန်ပြည်သူ များကို အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ ၂၀၀၈ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အများသဘောတူညီနိုင်သည် အထိ အချက်အလက်အချို့ကို ပြန်လည်မပြင်ဆင်လျှင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းမဝင်၊ မွန်အမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေး တပ်မတော် MNLA ကိုလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
နအဖတို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုနေပေမဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာ ဒီရပ်တည်ချက်ကို လုံးဝပြောင်းလဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဒီအကြောင်းကို အနည်းငယ်အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ယနေ့ကာလမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍမှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားရုံ မျှသာရှိကြပြီး စစ်အစိုးရထံက ဘာထောက်အပံ့ကိုမှ မရရှိတော့ပါဘူး။ စတင် အပစ်ရပ်စဲစဉ် သုံးလေးနှစ်လောက်ကာလ မှာပဲ စစ်အစိုးရက ထောက်ပံ့ခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလတွေမှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အဆင့်အလိုက် အပတ်စဉ်၊လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ပြဿနာရှိယင် ချက်ချင်းပြောဆိုဖြေရှင်းကြပါတယ်။
အမျိုးသားညီလာခံမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ အခြားအပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ တင်ပြချက်တွေကို ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရလို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အမျိုးသားညီလာခံကို ဆက်မတက်တဲ့ကိစ္စ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်ရဲ့ပန်ကြားချက်အရ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် မျက်နှာမပျက်ရလေအောင်၊ အများတကာမြင်ကောင်းကြားကောင်းအောင် မွန်ပြည်သစ်က လေ့လာသူအဆင့်အနေနဲ့ တက်ရောက်တဲ့အခါ အရေးသိပ်မပါတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲ လွှတ်သွားတဲ့ကိစ္စ၊ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ သဘောထားအတိုင်း ခေါင်းလိုက်မညိတ်တာတွေ များလာတာကြောင့် ပိတ်ဆို့မှု၊ ဖြတ်တောက်မှု၊ အကန့်အသတ်တွေအမျိုးမျိုးကို မွန်ပြည်သစ်အပေါ် လုပ်လာပါတယ်။ အယင်က ပုံမှန်အစည်းအဝေး တွေလည်း မရှိကြတော့ပါဘူး။ စစ်အစိုးရထံက စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့ အထောက်အပံ့တွေ မရရင် လုံးဝရပ်တည်နိုင် မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စစ်အစိုးရဖက်က ယူဆထားခဲ့ဟန်တူပါတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းမှာမဆို သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့ နှစ်ဖက်ခွ အချောင်သမားတွေတော့ ရှိတတ်ကြစမြဲပါ။ ပါတီရဲ့ အရေးပါတဲ့ နေရာတွေမှာရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဘူးခဲ့သူတစ်ယာက်စ၊ နှစ်ယောက်စ စစ်အစိုးရဆီက လာဘ်လာဘတွေကို မျှော်ကိုးပြီး သတင်းပေး၊ အကဲခတ်၊ အကြံပေးတွေ လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျပြန်တော့လည်း မွန်နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာ စင်ပေါ်တင်ဖို့က လူရှေ့သူရှေ့မှာ ခေါင်းဖော်၊ ခေါင်းမော်ဝံ့သူတွေမဟုတ်မှန်း စစ်အစိုးရ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ် အတင်းလုပ်ခိုင်းဖို့ကလည်း အင်အားစုနိုင်ဖို့က မွန်လူငယ်တွေကို စစ်ထဲဝင်ခိုင်း၊ မဲပုံးလာထောင်ရဲလောက်တဲ့သတ္တိခဲ မွန်မျိုးချစ်အာဇာနည်လောင်း တွေ နအဖရွေးမထွက်တော့ သူတို့အပါးတော် အကြံပေးအဆင့်လောက်မှာပဲ ဒီသစ္စာဖေါက်တွေကိုနေရာပေးထားရ ပါတယ်။
မဖြစ်နိုင်တာကို ထပ်မံတောင်းဆိုဖို့ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် မျက်နှာပူမိတယ်လို့ ထင်ပါရဲ့။ မေလနောက်ဆုံးအပတ်မှာ မော်လမြိုင်မြို့ကို သူတိတ်တဆိတ်ခေတ္တခဏ လာရောက်စဉ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို မခေါ်တော့ပါ။ နယ်ခြားစောင့်မဲ့ ဖထီးတွေကိုပဲ လာတွေ့သွားတယ်လို့ ရတခနဲ့နီးစပ်သူတွေက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် အမှာတော်ပါးခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ရတခတိုင်းမှူးက မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ထုံးစံအတိုင်း နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့ကိစ္စကို ဈေးထပ်ဆစ်ပြန်ပါတယ်။ အားနာနာနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက “ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး စဉ်းစားပေးမယ်” ဆိုပြီး တုန့်ပြန်ထားတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ စာရေးသူပါဝင်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေ ၄ ကြိမ်တိတိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်ကာလက အနာဂတ်တစ်နေ့မှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ကို နယ်ခြားစောင့် တပ်အသွင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စ လုံးဝမပါရှိခဲ့ပါ။
စစ်အစိုးရရဲ့ နယ်ခြားစောင့် Border Guard Force တပ်ကို အသွင်ပြောင်းလဲမယ့် အဖွဲ့တွေကတော့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တွေမှာ နိုင်ငံရေးအမြင်အားနည်းမှုနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတို့ကြောင့် ဒီဖေါ်ပြပါ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၅ ဖွဲ့ ဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း သဘောတူညီလိုက်ရတာကို အကဲခတ်မိပါတယ်။
၁။ ကယန်းအမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ Kayan National Guard (KNG),
၂။ ကရင်နီအမျိုးသားပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး Karenni Nationalities People Liberation Front (KNPLF),
၃။ တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်ဖွဲ့ Democratic Karen Buddhist Army (DKBA),
၄။ ကချင်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Kachin Defense Army (KDA),
၅။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ Pa-O National Organization (PNO)
ဒီတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ပြောင်းလဲဖို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက စစ်အစိုးရနဲ့ သဘောတူညီခဲ့တယ် ဆိုပေမဲ့ စစ်အစိုးရအရာရှိတွေ မိမိတပ်ဖွဲ့မှာ လာရောက်အုပ်ချုပ်လာမှာကို အောက်ခြေအရာရှိ ရဲဘော်တွေထဲမှာ ဂယက် ရိုက်ခတ်နေဆဲပါ။ ဘာသာစကား၊ စရိုက်ချင်းလဲမတူ။ မိမိလူမျိုးကိုယ်စားပြုတဲ့ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အမည် နာမတွေ ဖျောက်ဖျက်လိုက်ရတာကိုလည်း မကျေနပ်သူများ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးအရ စစ်အစိုးရထံဆီက သူတို့ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ အကူအညီများစွာ ရယူထားပြီး နှုတ်ဂတိတွေ ကျွံလာခဲ့တော့ ဘယ်လိုမှလည်း လွန်ဆံလို့မရတော့ပါဘူး။
ဒီတပ်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း သတ်မှတ်အရေအတွက်ပြည့်မီနိုင်ဖို့ လစာတစ်လကျပ်ငွေ နှစ်သောင်းခွဲနဲ့ အောက်ခြေရဲဘော်တွေ စုဆောင်းနိုင်ဖို့ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကရင်ကျေးရွာဒေသများမှာ တစ်ရွာဝင်ထွက်ပြီး မဲစနစ်နဲ့ လူငယ်များကို အတင်း အကြပ် ကောက်ယူနေရတာကို ကြားသိနေရပါတယ်။ စစ်အစိုးရတပ်တွေထဲမှာတောင် တပ်သားသစ်ရဖို့အရေးစုဆောင်း နိုင်ဖို့ အတော်လေးအခက်တွေ့နေရတဲ့ ကာလမှာ စစ်အစိုးရတပ်သားတွေဖြစ်လာရတော့မယ့် မြန်မာနယ်ခြားစောင့် စစ်သားလောင်း DKBA တွေ အခုလို စုဆောင်းပေးနေတာကို စစ်အစိုးရဖက်က သိပ်ကိုကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ အရွယ် ရောက်တဲ့ ကရင်လူငယ်တွေ အတော်များများက ထိုင်းနယ်စပ်ဖက်ကို ထွက်ပြေးနေရပါပြီ။
ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အခုနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ကိစ္စက စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အရပ်စကားနဲ့ဆိုလျှင် “ခင်ဗျားတို့တပ်ဖွဲ့က လက်နက်ရောလူတွေပါ အားလုံကို ကျုပ်တို့လက်ထဲအပ်၊ ခင်ဗျားတို့ကိုလခပေးထားမယ်၊ အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေကို ပင်စင်ပေးမယ်” ဆိုတာပါဘဲ။
Statement Final Edited
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, June 19, 20090comments
ဘုရား တရား သံဃာ ရည်စူးလျက် ရွှေတဂုံဘုရား ဦးထိတ်ထားပြီ ဤလို နေ့ မြတ်မှာ အမေစု မွေးနေ့ ပွဲကို ထောင်နံရံတွေ အတွင်းမှာကျင်းပ ရပေမယ့်လည်း အမေ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ တကမ္ဘာလံုးက ဆုတောင်းပေးနေမယ့် အမေစုမွေးနေ့ ပွဲမှာ အနှိုင်းမဲ့ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ နေ့ တနေ့ ဖြစ်ပါစေ။
ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်မှုများနေခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထု အခက်အခဲဖြစ်နေပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တိုင်ကြား
Wednesday, 17 June 2009 23:11 ဖြိုးကြီး
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းများ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်နေမှုများနှင့် ဖုန်လိုင်းများ အဆမတန် ပြတ်တောက်နေခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်နေရပြီး နေပြည်တော်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ လေးထောင့်ကန် အိတ်ချိန်းရုံးမှ ဝန်ထမ်းများကို မကျေနပ်သည့် ဖုန်းပိုင်ရှင် ၁၆ ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ယမန်နေ့က တိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“အိတ်ချိန်းရုံးက ဝန်ထမ်းတွေက လျှပ်စစ်မီးပျက်တဲ့အချိန်တွေမှာ မီးစက်မောင်းပြီး အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ချပေးထားတဲ့ ဒီဇယ်ကိုလည်း သူတို့က ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးတယ်၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်း ပျက်နေရင်လဲ ပြုပြင်ဖို့ခေါ်ရင် လိုက်ပြီးပြင်တာမရှိဘူး၊ နောက်တခါကျတော့ ဖုန်းလိုင်းတွေကို တမင်ဖြတ်ပြီး ပြင်ဖို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်လဲ အခကြေးငွေ တောင်းတယ်၊ အဲဒါတွေကို အထက်လူကြီးတွေသိအောင် တင်ပြတဲ့သဘောပါ” ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် လစဉ် ဖုန်းခွန်ပေးသွင်းရာတွင်လည်း သုံးစွဲထားသည်ထက် အဆမတန်များပြားနေပြီး ဝန်ထမ်းတွေကလဲ ဆက်ဆံရေး မကောင်းသည့်အတွက် စိတ်ညစ်နေရကြောင်း ဒေသခံက ဆက်လက်ပြောသည်။
“ဝန်ထမ်းတွေက ပြောတာဆိုတာလဲ မကောင်းဘူး၊ ကျနော်တို့ အခုဆို အရေးပေါ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ အရေးကြီးလို့ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် တော်တော်ကို ဒုက္ခရောက်နေရတယ်၊ အရင်က ရေဒီယိုဖုန်းတွေအစား ကန်းရိုးတမ်းသုံး အော်တိုဖုန်းတွေနဲ့ လဲတပ်တော့ ပိုက်ဆံ (၈) သိန်း ထပ်တောင်းတယ်၊ အဲဒါကြောင့်လဲ အခုလို တိုင်ရတာ” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း ပြတ်တောက်မှုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ လေးထောင့်ကန် အိတ်ချိန်းရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်နေခြင်းမှာ မှန်ကန်သော်လည်း အခြားအကြောင်းအရာများကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
“ဖုန်းလိုင်းပျက်လို့ တိုင်ထားတာ နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်၊ ပြင်တယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ဆီတိုင်မှ ပြင်ပေးရတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှ အခကြေးငွေတောင်းတာ မရှိပါဘူး၊ ကျနော်တို့ လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်” ဟု ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
လေးထောင့်ကန် အိတ်ချိန်းရုံးသို့ ဖုန်းလိုင်းပျက်သဖြင့် တိုင်းကြားသူ တနေ့လျှင် ၅ ဦးခန့်ရှိပြီး ယခုလအတွင်း တိုင်ကြားထားသူ ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောသည်။
တောင်ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ကျေးရွာများတွင် လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်မှ စတင်ပြီး ဖုန်းအလုံး ၂၀၀ ခန့် ချပေးထားပြီး ယခုအခါ အလုံး ၄၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, June 18, 20090comments
ကျွန်တော် လောလောဆယ်ဖတ် နေတဲ့ စာအုပ်နဲ့လက်ရှိ ဗမာ့စစ်ခေါင်းဆောင်များ
လူမှာ သဘာဝနှစ်မျိုးရှိတယ် ။ တိရစ္ဆာန်သဘာဝနဲ့လူ့ သဘာဝဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ မတရားလောဘကြီးတာ၊ အလွန် အကျွံ စားချင်သောက်ချင်တာ၊ နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်ချင်တာ၊ သုံးဖြုံးချင်တာတွေဟာ တိရစ္ဆာန်သဘာဝ တွေဘဲ။ ဒါတွေအားလုံးကို သတိလေးနဲ့ ဥာဏ်လေးနဲ့ယှဉ်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင် လူ့သဘာဝဖြစ်လာတယ်။ ထိန်းသိမ်းမှုလည်း ရှိရမယ်၊ လိုချင်တာလည်းသင့်တော်သလောက် ရရမယ်နော်၊ ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခဲ့ရင်တော့ တိရစ္ဆာန်အစစ်ဖြစ်သွားမှာဘဲ။
အိမ်ခေါင်မိုးက မိုးမလုံလည်း … ငါတို့လုံးဝ စိတ်မကုန်ပါ …
ရေခံခွက်အောက် မိုးစက်တပေါက်ပေါက် ကျသံ … တွံတေးကြီး တေးသံလား …
အမေဆင်မြန်းတဲ့ နန်းဆောင်အို ကိုရွှေသကြားမင်း ဗိမာန်မို့ …
အမေ ကောက်ညှင်းဆန် လက်တစ်ဆုပ်ပေါင်း နှမ်းထောင်းရင် …
နတ်ပေးတဲ့ သြသဓဆေး … အတိတ် အနာဂတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ …
တို့ အိမ်က မခွဲကြေး … ပညာမတတ် ဉာဏ်နည်းတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေလို့ …
မဟာဂေါဏ ဘို့လည်ထောင် … စူဠဂေါဏ နောက်အငယ်ကောင် …
အမေ့ရဲ့ တရားသံနာ … လူဟာဘယ်လောက်ထိ အသက်ရှင်လဲ …
လူဟာ လောဘတရားနဲ့ ငရဲလမ်းသွားတဲ့ … ဒုက္ခယက်ကောင်များ …
နှာခေါင်းရှုံ့ လက်ခါမလား … စိတ်မဆင်းရဲဘူးဟေ့ တို့အိမ် …
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, June 17, 20090comments
Labels: မျှဝေခြင်း, ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ
Written by KNG Tuesday, 16 June 2009 20:30
ရှိတာအကုန်ရောင်းတယ် ရတဲ့ငွေ ပြည်သူတွေ မျက်စောင်းထိုးမယ် မကြံနဲ့ 
ရခိုင်-တရုတ် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စက်တင်္ဘာတွင် စတင် တည်ဆောက်မည်
မင်းဆက်ခိုင်(နိရဉ္စရာ) ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အကြား တည်ဆောက်မည့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို လာမည့် စက်တင်္ဘာလမှ စတင်ပြီး အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပိုက်လိုင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့ ထိ ဖေါက်လုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ထိုမှ တဆင့် ဂွမ်းဂျုံး ပြည်နယ် ချုံကန်း ဒေသအထိ ဖြတ်သန်း ဖေါက်လုပ်မည် ဟု တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဂျာနယ် တစောင်က ဖေါ်ပြသည်။
ပိုက်လိုင်းမှာ ၂၈၀၆ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်အမျိုးသား ရေနံ ကော်ပိုးရေးရှင်း (CNPC) က တာဝန်ယူ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၂ မှ စတင်ပြီး တနှစ်လျှင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ တန်ချိန် ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံနှင့် ရေနံစည်ပေါင်း ၄ဝဝဝဝဝ တင်ပို့ နိုင်မည် ဟု အဆိုပါ ဂျာနယ်က ဖေါ်ပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာ ၂ နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂ဝဝ၈ အတွင်းက ၂ ဒဿမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရှိခဲ့ရာမှ အဆိုပါ ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ပြီးပါက ကုန်သွယ်မူ ပမာဏ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စသည့် စီမံကိန်း များတွင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁ ဒဿမ ၃၃ ဘီလီယံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေနံများကို သာမက စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ၊ ကျွန်းသစ် အပါအ၀င် သစ်မာများနှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အပါအ၀င် သတ္တု- ကျောက်မျက် ရတနာများကို တင်ပို့ နေသည်ဟု သိရသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Tuesday, June 16, 20090comments
ဝက်များ တုပ်ကွေးဖြစ်လျှင် စိုးရိမ်စရာမလိုဟုဆို
Tuesday, 16 June 2009 16:57 ကြည်ဝေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် H1 N1 တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားပါက ၀က်များအား ရှင်းလင်းပစ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များနှင့် ကုသပျောက်ကင်း နိုင်သည်ဟု မွေးမြူရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး အသင်းက မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ရှင်များကို ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
[ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ကျောင်းသားတချို့တွင် H1 N1 ရောဂါပိုး တွေ့ရသဖြင့် တက္ကသိုလ်များ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ဇွန် ၁၅ ရက်နေ့က ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို စစ်ဆေးပေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - အေပီ)]
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ကျောင်းသားတချို့တွင် H1 N1 ရောဂါပိုး တွေ့ရသဖြင့် တက္ကသိုလ်များ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ဇွန် ၁၅ ရက်နေ့က ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို စစ်ဆေးပေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - အေပီ)
၀က်များတွင်ဖြစ်ပွားသော H1 N1 တုပ်ကွေးပိုးကို တခြားနိုင်ငံကြီးများတွင် တွေ့ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ မတွေ့ရှိရသေးကြောင်း၊ ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင်လည်း အဆိုပါ ၀က်ကို သီးသန့်အခန်းတွင် ထားပြီး တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်နှင့် ကုသပါက ပျောက်ကင်းကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦး လှိုင်မြင့်ဦးက ဇွန်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“၀က်တကောင်ရဲ့ တန်ဖိုးကလည်း မနည်းတော့ ၀က်ကို ဘယ်သူမှ ဆုံးရှုံးခံချင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် တုပ်ကွေး ဖြစ်တဲ့ ၀က်ကို သီးသန့်ခန်းထဲမှာ ထားပြီး ကုသပေးရင် ပြန်ကောင်းလာမယ်။ ကောင်းသွားမှ ပြန်မွေးလို့ရတယ်။ ၀က်သားကို သေချာ ချက်ပြုတ်စားရင်လည်း ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ လူကို မကူးနိုင်ပါဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
၀က်တုပ်ကွေးသတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည့်အတွက် ဈေးကွက်အတွင်း ၀က်သားရောင်းအား ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ၀က်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များလည်း ထိခိုက်မှုများရှိလာကြောင်း၊ စားသုံးသူများမှာ ၀က်သားစားသုံးမှု အပေါ်တွင်
သံသယဖြစ်နေပြီး မွေးမြူသူများကလည်း H1 N1 တုပ်ကွေးဖြစ်လာမည်ကို ကြောက်ရွံ့နေကြကြောင်း၊ တချို့ ခြံများတွင် ရာသီအလိုက် ၀က်များ နေမကောင်းဖြစ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည့်အတွက် မွေးမြူရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး အသင်းက မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ထုတ်ပြန် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
Flower News ဂျာနယ် အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၂၂ တွင်လည်း H1 N1 တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားပါက “မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၀က်များကို သုတ်သင်ပစ်ရန်မလိုဘဲ ဆေးကုသရုံဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းတွင်လည်း ဦးလှိုင်မြင့်ဦးက ၀က်၌ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများ၊ H1 N1 တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ချောင်းဆိုးခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်များနှင့် တပတ်ခန့် ကုသပေးပါက ကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်။
“ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် ၀က်တုပ်ကွေးကို အရမ်းသတိထားနေချိန်မှာ ဦးလှိုင်မြင့်ဦးအနေနဲ့ အဲဒီလို လက်လွတ်စပယ်ပြောတာ ဆိုတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒီက အခြေအနေက ၀က်တုပ်ကွေးကို ကုသနိုင်ဖို့ မပြောနဲ့ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာတောင် သိနိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိဘူး” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းအယ်ဒီတာ တဦးက ဆိုသည်။
မင်္ဂလာဒုံ၊ ပျဉ်းမပင် ၀က်မွေးမြူရေးခြံများအပါအ၀င် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ၀က်မွေးမြူရေး ခြံတချို့ရှိဝက်များတွင် ယခုအခါ မိုးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော နှာရည်ယိုခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စသည့် တုပ်ကွေး လက္ခဏာကို တွေ့မြင်ရသော်လည်း ထိုရောဂါကို H1 N1 တုပ်ကွေး ရောဂါ ဟု ပြောဆိုရန် ခက်ခဲ ကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးက ပြောဆိုသည်။
“ရာသီကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ ၀က်တွေ ဖျားကြတယ်၊ တုပ်ကွေး လက္ခဏာလည်း တွေ့ရတယ်။ အဲဒီလို ပြောရင် လူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် သာမန်ဖျားတာလို့ပဲ
ပြောရမယ်ထင်တယ်” ဟု မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်တဦးက ပြောဆိုသည်။
ရောဂါဖြစ်နေသည့် ၀က်ကို ၎င်းဌာနမှ ဂရုတစိုက် သွားရောက်ကြည့်ပေးပြီး ထိုဝက်များကို ဈေးထဲတွင် ချမရောင်းရန်နှင့် အသားမပေါ်ရန် ဌာနက တားမြစ်ထားသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မေလအတွင်း ၀က်တုပ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးခဲ့သောလူ ၂၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း မြောက် ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးနှင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်မှ ကြားသိခဲ့ရသော်လည်း အစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရှိသကဲ့သို့ မီဒီယာများကလည်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိ သေးကြောင်း သိရသည်။
၀က်တုပ်ကွေး သတင်းများ စတင်ကြားရစဉ်က ၀က်သား စားသုံးမှု လျော့ကျသွားသော်လည်း ယခုအခါ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် စားသုံးနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း တာမွေဈေးမှ ၀က်သားအရောင်းဆိုင် တဆိုင်ကဆိုသည်။
“အရင် သတင်းကြားခါစကတော့ ရောင်းအားနည်းနည်းကျတယ်။ နားလည်တဲ့ သူတွေလောက်ပဲ အစား လျော့သွားတာ။ ၀က်သား ဈေးကျလို့ဆိုပြီး စားကြတဲ့သူတွေရှိတော့ ဈေးကွက်ကို သိပ်မထိခိုက်လိုက်ပါဘူး။ ဘာမှ မဖြစ်တော့လည်း လူတွေက ပြန်စားနေကြပြီပဲ။ ရောင်းအားရော ဈေးရော ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီ” ဟု အဆိုပါ အရောင်းဆိုင်က ဆိုသည်။
H1 N1 တုပ်ကွေးသည် ယမန်နေ့ကအထိ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၇၆ နိုင်ငံသို့ ပျံနှံ့ခဲ့ပြီး လူ ၃၀၀၀၀ ကျော်သို့ ကူးစက်ခဲ့ကာ သေဆုံးသူ ၁၆၃ ဦးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း (WHO) ကဖော်ပြ ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ထိုင်းတွင်လည်း ယမန်နေ့ကအထိ ကူးစက်ခံရသူ ၂၀၁ ဦးရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောဂါကူးစက်သူဦးရေ ၃၀၀ နှင့် ၄၀၀ ကြားတွင် ရှိနေကြောင်း သိရ သည်။
ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ တောင်ကိုရီးယားတွင် H1 N1 တုပ်ကွေး ကူးစက်သူ ၅၆ ဦးရှိပြီး ဗီယက်နမ်တွင်လည်း ၂၀ ဦးရှိနေပြီဟု ကြေညာထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀က်ကောင်ရေ ၇ သန်းခန့် ရှိသော်လည်း H1 N1 တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသည်ကို မတွေ့ရသေး ကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားသည်။
“ကြက်တုပ်ကွေးတုန်းကလည်း မရှိဘူးလို့ အရင်ပြောတာပဲ၊ နောက်မှ ၀န်ခံတဲ့ သာဓက တွေလည်း ရှိတော့ ၀က်တုပ်ကွေးသတင်း ကြားကတည်းက အိမ်မှာ ၀က်သား မစားခိုင်းတော့ဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော သူတို့ကို မယုံဘူး။ သတင်းထုတ်ပြန်တာလည်း မရှိတော့ ခုကိစ္စမှာလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ကာကွယ် ရမယ် ထင်တယ်” ဟု ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်သည့် ရှေ့နေတဦးက ပြောဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ၀က်တုပ်ကွေးမရှိကြောင်း ကြေညာနေခြင်းမှာ ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်း ထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ် သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ရှေ့နေက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝက်များကို နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများမှ တဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ဒေသသို့ အဓိကတင်ပို့လျက် ရှိပြီး ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ၁၂ တန် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၀က်တုပ်ကွေး သတင်းများကြောင့် အိန္ဒိယသို့
တင်ပို့မှု လျော့ကျသွားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ ပြန်လည်တင်ပို့ နေရပြီဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန်မဖြစ်သေးကြောင်း၊ မေလတွင် ၀က် ၆၀၈ ကောင်ကို ၁၂ ကြိမ်ခွဲ၍ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ဇွန်လက ၁၄၂ ကောင်သာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။
အဆုံးသတ် ကံမြင့်ချိန် (ဖတ်သင့် ဗဟုသုတ ရယူသင့်တဲ့တပ်မတော်အရာရှိ အဖြစ်အပျက်)
တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦးရဲ့  ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ အတွေးအမြင် တစ်ခုကလည်း ဗဟုသုတ ရစရာမို့ ဒီကနေ့မှာ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြုသမျှ ကံဟာ တစ်နေ့မှာတော့ ကိုယ့်ဆီသာ ပြန်လာစမြဲမို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ အချိန်မှီ အမြင်မှန်တရား ရရှိကာ တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုး ဆထက်တံပိုး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်က ဆန္ဒပြု ပေးပို့ လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပေးပို့လာတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် တပ်မတော် အရာရှိ သိုးထိန်းအား ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း စည်းလုံးခြင်းရဲ့  အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဆောင်းပါးရှင် - သိုးထိန်း (တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦး)
ယနေ့ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်သော စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှ မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား များသည် ကျီးလန့်စာစား ဘ၀ကို ရုန်းကန် ဖြတ်သန်းနေကြရသည်။ ခေတ်တစ်ခေတ်၏ မင်းကောင်း မင်းဆိုးအပေါ်တွင် အဓိက အကျိုးအမြတ် ခံစားနေရသည်မှာ ပြည်သူတွေသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ ပြည်သူများခမျာ မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေကြားမှာသာ ကျင်လည်ကြီးပြင်း နေခဲ့ကြရသည်မှာ ကံဆိုးလှပေသည်။ ဘယ်သောအခါမှ မင်းကောင်း မင်းမြတ် ပေါ်မည်နည်း။ ယနေ့ခေတ် ကာလကတော့ဖြင့် မင်းဆိုးမင်းညစ်တို့၏ တန်ခိုးအာဏာ အကြီးထွားဆုံး အချိန်ကာလ ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်သူတွေခမျာ တံတားဆောက်လို့ အိမ်ဖယ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီ။ တပ်မြေမို့လို့ လယ်တွေ၊ ယာတွေ အသိမ်းခံလိုက်ရပြန်ပြီ၊ မိရိုးဖလာ လုပ်လာသော လယ်မြေတွေကို ပိုင်ရှင်အတိအကျ မပြနိုင်၍ တပ်ပိုင် အသိမ်းခံ လိုက်ရပြန်ပြီ စသည်….စသည်ဖြင့် ဒုက္ခ တွေ ပင်လယ်ဝေကာ ပြည်သူတွေ အတိဒုက္ခ ရောက်ကြသည်မှာ သနားစရာပင် မြင်တွေ့နေရသည်။
အဲ့ဒီလို ဖြစ်စဉ်တွေအတွက် ဖြေသာစရာ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု မြန်မာပြည်သူများကို ပြောပြချင်သည်။ ယနေ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် လူသားများသာ မဟုတ် နတ်ဒေ၀တာများပါ မကျန် နေစရာ နေရာမရှိသည်ကို ယုံကြည်မည် လားမသိ။ ပြည်သူတွေ အားမငယ်ကြပါနဲ့၊ နတ်ဒေ၀တာတွေပင် နေစရာ ခဏခဏ အသိမ်းခံရလို့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။
ယခုဖော်ပြမည့် ဖြစ်စဉ်လေးသည် ကျွန်တော် တက်ရောက်ခဲ့သော စစ်တက္ကသိုလ်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဖြစ်စဉ်လေး ဖြစ်သည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်တွင် သိပ္ပံနည်းအရ လက်ခံဖွယ်ရာ မရှိသော သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်များ ပါဝင်နေပေသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က စစ်သားလည်းဖြစ်၊ ယင်းသဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်များကိုလည်း မကြုံခဲ့ဖူး၍ မယုံကြည်ခဲ့ချေ။ သို့သော် ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသော ယင်းဖြစ်စဉ်လေးမှာတော့ ယုံရမလိုပင် ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ၀န်ခံရပေမည်။
စစ်တက္ကသိုလ်သည် ယခင်က တပ်ရင်းတစ်ရင်းသာ ရှိသည်။ ကျွန်တော် စစ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ တပ်ရင်း(၂)ရင်း ဖြစ်နေချေပြီ။ တပ်ရင်း(၁)နဲ့ တပ်ရင်း(၂)။ အသစ် တိုးချဲ့ထားသော တပ်ရင်း(၂)သည် ယခင်က တောအုပ်ကြီး၊ ၎င်းတောအုပ်ကြီးကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းပြီး တပ်ရင်း(၂) ကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က တပ်ရင်း (၁)မှ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် Final year ရောက်တော့ တပ်ရင်း(၃) ကို တိုးချဲ့ တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းတပ်ရင်း(၃)သို့ ကျွန်တော် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။
၎င်းတပ်ရင်း (၃) ရှိ ကျွန်တော်တို့ တပ်ခွဲနောက်တွင် “ရေကွက်” လေးတစ်ခု ရှိသည်။ ပေ ၂၀ သာသာ လောက် ရှိမည်။ ဘယ်က ဘယ်လို ရေထွက် နေသည် မသိ။ အပြင်ကို လျှံမသွား၊ ရေလည်းခမ်းမသွား ၎င်း “ရေကွက်” လေး၏ ဘေးတွင် သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင် ရှိသည်။ ထိုသစ်ပင်ကြီး အောက်တွင် နတ်စင်လိုလို ခပ်ယိုင်နဲ့နဲ့လေး တစ်ခုပြုလုပ်ထားသည်။ ဘယ်သူက လာလုပ်သွားသည်မသိ။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ရင်း(၃)ကို ပြောင်းရွှေ့မလာခင်ကတည်းက ရှိနေသော နတ်စင် လေးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ Final year များကတော့ အယုံအကြည် သိပ်မရှိ။ ထမင်းစား တန်းဖြုတ်ပြီး အပေါ့သွားချင်သည် ဆိုပါစို့၊ အိမ်သာသို့ ၀င်မသွားတော့။ ၎င်းရေကွက်၏ အပေါ် လှေကားထစ်မှ “ရေကွက်” ထဲသို့ ကော့ကော့ပန်းကြသည်မှာ အကျင့်လို ဖြစ်နေသည်။ စားရိပ်သာနှင့် လမ်းသင့်၍ လည်းကောင်း၊ “ရေကွက်” ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ ရူးရူးတို့ ထိတွေ့သွားသည့် ပလုံစီ အသံလေးကပင် နားထောင်ကောင်းသယောင်၊ ဒီကြားထဲ First year များကို အမှိုက်သွန်ခိုင်းလျှင် စီနီယာ ဗိုလ်လောင်းများ လစ်တာနဲ့ ၎င်းရေကွက်ထဲသို့ ပစ်ချကြသည်။ အမှိုက်ပုံသို့ မသွားကြ။ အမှိုက်ပုံက ဝေးသည်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ရေကွက်ကလေးကို လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြရာ တစ်နေ့ တပ်ခွဲမှူးအရာရှိက ကျွန်တော်တို့ Final year များကို လာပြောလေသည်။
“၎င်းအား ညက ပိတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် အဘိုးကြီးက အိပ်မက်လာပေးကြောင်း သူ့ရဲ့ ရေကွက်ထဲသို့ အမှိုက်တွေ ပစ်ကြောင်း၊ အပေါ့အလေး စွန့်ကြောင်း မင်းလူတွေ မင်းထိန်းလို့ ပြောသွားကြောင်း” ကျွန်တော်တို့ကို အကြားအမြင်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံစံနဲ့ လာပြောလေသည်။ ကျွန်တော်တို့က ပြန်မပြောရဲ၍သာ ငြိမ်နေရသည်။ စစ်သားကို အိပ်မက်အကြောင်း လာပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ နားထဲ ကန့်လန့်ကြီး ဖြစ်နေတာ သေချာသည်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၎င်းဗိုလ်ကြီး စိတ်ကျေနပ်အောင် First year များ ရေကွက်ထဲသို့ အမှိုက်မပစ်ရန် တင်းကြပ်စွာ အမိန့်ထုတ် ပေးလိုက်ရတော့သည်။
သို့ပေမယ့် စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ထိန်းမရဆုံးက Final year များဖြစ်ကြသည်။ ရေကွက်ထဲသို့ အပေါ့မသွားပါနဲ့ တောင်းပန်လည်းမရ၊ အပေါ့သွားမြဲ သွားသည်။ နောက်တပတ်လောက်လည်းကျရော တပ်ခွဲမှူးအရာရှိ ပြန်ရောက်လာပြီး ညက သူ့ကို အိပ်မက်ထဲမှာ လည်ပင်းလာညှစ်ကြောင်းပြောပြီး ပုဆိုးကို ခါးတောင်းကျိုက်၊ ပေါက်တူးတစ်လက်နဲ့ ရေကွက်ထဲဆင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေပါတော့သည်။ သူပြန်တော့ နတ်စင်လေးမှာ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ထမင်းတောင် ကပ်သွားလိုက်သေးသည်။ ၎င်းတပ်ခွဲမှူးကို ဘယ်လို ယုံကြည်ရမှန်းမသိ၊ စိတ္တဇဖြစ်နေပြီလားလို့တောင် ထင်လိုက်မိသည်။
ဒါပေမဲ့ ၎င်းအရာရှိ ကတော့ အပတ်စဉ်ပုံမှန် ၎င်းရေကွက်ကို သန့်ရှင်းရေးလာလုပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ နေ့စဉ်မှန်မှန် ရေကွက်ထဲ အပေါ့သွားသည်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ည First year ခန်းဘက်မှ ဆူဆူညံညံ အသံများ ကြားလိုက်ရသည်။ စစ်တက္ကသိုလ်တွင် ဂျူနီယာများ ဤကဲ့သို့ ဆူဆူ ညံညံလုပ်ဖို့ နေနေသာသာ စီနီယာရှေ့တွင် စကားပင် ပြောခွင့်မရှိ၊ ကျွန်တော်တို့ စိတ်အရမ်းတိုသွားသည်။
ဒါနဲ့ Final year ဗိုလ်လောင်းတွေ First year အခန်းထဲ ချက်ချင်း ထလိုက်ကြသည်။ First year က ပထမဆုံး ၀င်လာတဲ့ ဗိုလ်လောင်းတပ်ခွဲမှူးကို ပြေးထိုးပါတော့သည်။ ဗိုလ်လောင်းတပ်ခွဲမှူးခမျာ ဖင်ထိုင်ပါကျသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း စိတ်အရမ်းတိုကာ ၎င်း First year ဆီ ပြေးအ၀င်၊ ၎င်း First year ကလည်း တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဆင့်ဆင့်ထိုးလိုက်တာ အကုန်လုံး အကွဲကွဲ အ ပြဲပြဲ ဖြစ်ကုန်သည်။
အဲ့ဒီ First year ကို Second year ၁၀ယောက်လောက် ၀ိုင်းချုပ်တာတောင် ထိန်းလို့ သိမ်းလို့မရ၊ နောက်အသံနက် ကြီးနဲ့ ထအော်တော့သည်။ “မင်းတို့ အရာရှိကို သွားခေါ်တဲ့” ကျွန်တော်တို့လည်း အခြေအနေ မဟန်တာနဲ့ တပ်ခွဲမှူးအရာရှိကို သွားပြေးခေါ်ရသည်။ တပ်ခွဲမှူးအရာရှိရောက်လာပြီး သောင်းကျန်းနေတဲ့ First year ကို မြင်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ချက်ချင်း လှည့်ပြေးပြီး တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်နိုင်ကို ပြေးခေါ်ပါတော့သည်။ သိပ်မကြာလိုက် တပ်ရင်းမှူး ရောက်ချလာသည်။ တပ်ရင်းမှူး ရောက်လာသည်အထိ First year ရဲ့ အခြေအနေကို မထိန်းသိမ်းနိုင်သေး။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေဆဲပင်။
တပ်ရင်းမှူးကို မြင်သည်နှင့် First year က “ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ဟာက မလွန်ဘူးလားကွ ဟင်.. ငါ့ဘာသာငါ ဟိုဘက်မှာ နေတယ်” ဆိုပြီး လက်ညိုးလှမ်းထိုးပြတဲ့နေရာက ယခင်တောအုပ်ကြီးကို ရှင်းပြီး ဆောက်လုပ်ထားသောတပ်ရင်း(၂)၊ ပြီးတော့ ဆက်အော်ပြန်သည်။“မင်းတို့ရွှေ့ ဆိုလို့ ဒီဘက်ရွှေ့လာပြီးပြီ။ တခါထပ်ပြီး ကျူးကျော်လာပြန်ရော၊ တစ်ကောင်မှ လေးစားမှု မရှိဘူး၊ ငါ့ကို နေရာတစ်နေရာစာ အမြန်ပေးစမ်း” ဆိုပြီး အသံနက်ကြီးနဲ့ အားရပါးရ အော်ကာ ရပ်သွားတော့သည်။ အပ မီသလိုလို ဖြစ်နေသော First year လည်း အရုပ်ကြိုးပြတ် လဲကျသွားသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အပမီသည်ဆိုလို့သာ သီးခံလိုက်ရသည်၊ ၎င်း First year ထိုးထည့်လိုက်သော ဗိုလ်လောင်းများမနဲ။
နောက်နေ့ တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်နိုင် ကိုယ်တိုင် ပြန်တမ်းစာတခု ယူလာပြီး တပ်ခွဲ အနောက်ဘက်ရှိ အပင်က ရုက္ခစိုးကို အနောက်ဘက်က တောအုပ်ထဲသို့ ရွှေ့ပေးလိုက်ရသည်။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးသည် စစ်တက္ကသိုလ်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့်တဆက်တည်း ရာဇ၀င်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်သည်။ အနော်ရထာမင်းကြီး ဘုန်းတန်ခိုး လွန်စွာ ထက်မြက်နေသော အချိန်က သစ်ပင်စောင့် ရုက္ခစိုး နတ်တစ်ပါးကို ကျိန်ဖြင့် ရိုက်၍ အပြစ်ပေးဖူးသည် ဟူ၏။ အကြောင်းက အနော်ရထာမင်းကြီး တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာစဉ် သစ်ပင်စောင့်ရုက္ခစိုးက ခရီးဦးကြိုမပြု ဘဲ နေခဲ့သောကြောင့် ဟုဆို၏။
သို့ပေမဲ့ အနော်ရထာ ဘုန်းတန်ခိုး အာဏာယုတ်လျော့ လာသောအခါ ၎င်းကိုယ်တိုင် ကျိန်ဖြင့် ရိုက်၍ အပြစ်ပေးခဲ့သော ရုက္ခစိုးက ကျွဲယောင် ဖန်ဆင်း၍ အနော်ရထာမင်းအား ရန်ငြိုးထား ဝှေ့သတ်ခဲ့သည်ဟု ရာဇ၀င်များတွင် ကြားဖူး လေသည်။( ပါးစပ်ရာဇ၀င် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်)
၎င်းရာဇ၀င်လေးနှင့်ဆက်စပ်စွာ ယနေ့စစ်အာဏာရှင် လူတစ်စုသည် ဘုန်းတန်ခိုး အာဏာ အမြင့်ဆုံး အချိန်ကို ရောက်ရှိနေသည်မှာ သေချာလှသည်။ သို့သော်လည်း ကျွဲဝှေ့ခံရဖို့ အချိန်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း နီးလာပြီ ဆိုတာကိုလည်း စေတနာရှေ့ထား၍ သတိပေး နှိုးဆော်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။
(စာကြွင်း။ ။ ကျွန်တော်တို့ စစ်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်းပြီး ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရန် ပြင်ဦးလွင်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ကျွန်တော်တို့ တပ်ခွဲနောက်မှ ရုက္ခစိုးအား နေရာရွေ့ပေးခဲ့သော တောအုပ်ကြီးတွင် တပ်ရင်းအသစ်တစ်ခု တိုးချဲ့နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ ရပါသည်။)
http://www.photayokeking.org/ ကိုဖိုးတရုပ် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကူးယူ သိမ်းဆည်းပါသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, June 15, 20090comments
ဆောင်းပါးရှင် - ညီတိုးငြိမ်း (ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦး)
authentic-leaderစစ်တပ်ထဲက တပ်တွင်းအချုပ်တွင် ချုပ်သွင်းထားသော အချုပ်သားကို လူတစ်ယောက်က ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လာတွေ့သည်။ လက်ရှိ ဥပဒေအရ အချုပ် ခံထားရသူသည်သာ အပြစ်ရှိသူ ဖြစ်နေသည် ဆိုလျှင် လက်ရှိ စစ်ထောင် အသီးသီးရှိ အချုပ်ခံ စစ်သားတို့ကို လွတ်မြောက်အောင် ၀ိုင်းကူညီကြမည်။ ကူညီသူများကို မိလျှင်လည်း ချုပ်ခံနေရသော အချုပ်သားမှာသာ အပြစ်ရှိမည်။ ကူညီသူ သွားတွေ့သူမှာ အပြစ် မရှိနိုင်ပေဟု ထပ်တူပုံတူ ကူးသော အတွေးဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာ တွေးနေမိသည်။ ထို့ပြင် ဗဟိုကင်းတို့ ဘာတို့ အစောင့်တို့လည်း လုံးဝ အပြစ်မရှိ၊ ဒီလို သဘောလား၊ တွေးကြည့်ပါကုန်။
မနှစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့သော အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးကို အချုပ်နှောင်ခံ အကျဉ်းစံက တိုင်တန်းသတင်းပို့ချက် ပြုပါရက်ကယ်နဲ့ မသိကျိုးကျွံပြုထားပြီး ယခုနှစ် အလားတူ ဖြစ်လာသော အခါကျမှ ကြီးကျယ်သော ပြစ်မှုကြီး ဖြစ်လေဟန် ရုပ်လုံးဖေါ်ခြင်းသည် တရားမျှတခြင်း ရှိပါရဲ့လား။ ထောင်ချောက်လေလား။ လုပ်ကွက်ဇာတ်လမ်း ဆင်တာလေလား။ လုပ်ကြံဖန်တီးချက်လား။ လေလားတွေ များပြီးေ၀၀ါးလာလေရဲ့၊ ဖမ်းလည်း ဖမ်းထားသေး။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အားလုံးကိုလည်း ဖြတ်တောက် ထားသေး။ မရှက်သော ယက်တော မြက်လျောလို ခိုးဝင်လာလို့ အကျဉ်းစံ မဟာလူသားက တိုင်ကြားသတင်းပို့ရန် ကြံကာရှိသေး။ တစ်ဦးတည်းသော ထိတွေ့ခွင့်ရရာ ဆေးဆရာဝန်ကို လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ ဆိုသူတွေက ဆည်ပေါက်ဝ ဗျိုင်းစောင့် ဖမ်းသလို ပိတ်ဖမ်းပြီး အဆက်သွယ် ဖြတ်လိုက်ပြန်သေး။ ပြီးတော့ အနှောင်စံ အမျိုးသမီး အထီးကျန် အကျဉ်းစံ သုံးဦးကို ဘယ်သူကိုမှ သတင်းမပို့လို့တဲ့ ။ တရားချက်ကွာ။ တောက် ….
အခု အမှုတွေ စစ်သတဲ့။ တရားတွေ စွဲသတဲ့။ ဖြစ်စဉ်တွေ တသီကြီးနဲ့ စွဲချက်တွေ တင်သတဲ့။ အဲဒီဖြစ်စဉ်စွဲချက်တွေထဲ အကျဉ်းစံ မဟာ လူသားတို့ကို မလှုပ်မပြေးနိုင်အောင် ပတ်လည်ကာကွယ်စောင့်ကြည့် တာဝန်ယူရတဲ့ လုံခြုံရေး ဆိုသူ တာဝန်ရှိသူတွေကျ တခွန်းမှ မဟ။ တစမှ မဖေါ်။ ပေါ်လာမှာတောင် ကြောက်နေဟန်နဲ့ ရေငုံရယ်တဲ့မှ နှုတ်ပိတ်။ ဒါကြောင့်လည်း တရားသူကြီးဆိုတဲ့ ဘက်လိုက်တော်သားကြီး အိမ်ကို ဂဲ နဲ့ အထုခံရတာ .. နည်းတောင် နည်းသေး။
ကျုပ် စစ်သားသာ အဲဒီ မတရားသူကြီး ဆိုသူနဲ့ အိမ်ချင်းနီးနေရင် မီးတောင် တင်ရှို့ပစ်မယ် မှတ်။ ဒီလောက်တောင် ပေါ်တင်ကြီး ညစ်ပတ်နေမှန်း သိရက် တရားသူကြီးဆိုတဲ့ နာမည်ခံရဲတဲ့ ကောင်။ ၀တ်လုံနက်ကြီး ၀တ်ရဲတဲ့ကောင်။ ဒါလား တရားမျှတမှုကို ဖေါ်ဆောင် စီရင်မယ့် တရားသူကြီးလားကွ ဆိုပြီး ငတို့ ရှေ့တန်းမှာ မိုင်းထောင် လူသတ် မုဒိမ်းကျင့် တရားခံမိရင် စစ်ဆင်ရေးကာလ အပြစ်ပေး နည်းကားနဲ့ လည်ပင်း ၀ါးကြောလှီးသတ် သလိုတောင် သတ်ချင်မိသေး။
တရားမျှတမှု ဆိုတာတွေ ငတို့ လူနေမှု စနစ်ထဲ မရှိတော့ရင် ငတို့လည်း လူသားချင်းစာနာတယ် ဆိုတဲ့ ထောက်ထားစာနာမှုကို ခနခေတ္တတော့ ဘေးဖယ်ထားရကောင်း ထားရနိုင်တယ်။ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်နေတဲ့ ဒီလို ဥပဒေ ဘက်တော်သား ဆိုသူကို ဥပဒေ စီရင်ထုံးတွေ တည်ဆောက်ပြီး စီရင်စွဲချက်တင် နေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြတ်ပြတ်ဘဲ ရှင်းစရာ ရှိတော့မယ်။
ပြစ်ချက်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ စွဲချက်တင်။ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်။ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းလည်း မနည်းတော့ဘူး။ ဒါတောင်မှ ခုတခါ ဖမ်းရတာဟာ မဖမ်းချင်ဘဲ ဖမ်းရတာပါတဲ့။ လွှတ်တော့မယ့် ဆဲဆဲ။ အခုလို မြက်လျော ယက်တောကို လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့လို့ မဖမ်းချင်ဘဲ ဖမ်းရတာတဲ့ ။
ငါစစ်သားနဲ့ အဲဒီစကားပြောတဲ့ ရဲချုပ်ဆိုသူ သက်ကြားအို ဗိုက်ရွှဲ စစ်ဓါးမြဗိုလ်ချုပ် နှစ်ယောက်ချင်းယှဉ်ပြီး ဘယ်ကောင် တိုင်းပြည်ကို ပိုချစ်သလဲ ။ ဘယ်ကောင် မှန်သလဲ မှားသလဲ။ လက်ရုံးရည် နှလုံးရည် ဘယ်သူ ပြည့်သလဲ အများ ပြည်သူလူထုရှေ့ ပြိုင်လိုက်ချင် စမ်းပါဘိ။
ဟော အခုကြည့် စွပ်စွဲခံရသူ ဘက်က ထိမိခိုင်မာတဲ့ ထွက်ဆိုခြေပချက်တွေလည်း ပေးလိုက်ရော။ အဓမ္မသမားတွေ ရုံးချိန်းရွှေ့တယ် ဆိုပြီး ဆင်ကြံကြံဖို့ အချိန်ယူတော့တာပဲ။ စဉ်းစားတတ် သူတိုင်း သိနေတာဘဲ။
unjustifiedလွှတ်ရက်စေ့လို့ မဖြစ်မနေ လွှတ်ရတော့မယ့် ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်။ ဒီခေါင်းဆောင်က ညွှန်ကြားရင် တာဝန်ပေးရင် ဘာမဆို လုပ်မယ့် ငတ်မွတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ လူထုကြီးက တလှုပ်လှုပ်။ တိုင်းပြည်က ဖွတ်ကျောထက်က ဂျွတ်ပွေးသာသာ အခွံပဲကျန်ပြီ။ လူတွေ အချင်းချင်း အမွဲပြိုင်ရင်တောင် လူတိုင်းဟာ ပထမ ဆုချည်းဘဲချိတ်မယ်။ အမွဲဆုံး ဆုတွေ လူတိုင်းကို ပေးပါဆိုရင် ခြေလျှင် ခြေမြန်တပ်ရင်းက ကျုပ်တပည့် ရဲဘော် အကြပ်တွေ စစ်သည်တွေ ထိပ်ဆုံးက ပါမှာ အသေအချာပဲ။ သူတို့လည်း ငမွဲပဲ။ မမွဲတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဆိုလို့ မြို့ပြက စစ်မလိုင်တပ်တွေ။ အပါးတော်မြဲ လုံခြုံရေး တပ်တွေ။ ကိုယ်ရံတော် တပ်တွေသာ အခွင့်အရေးတွေ တပြုံတမကြီးနဲ့ စည်းစိမ်ခံ ယစ်မူးနေနိုင်တာ။ အားလုံး သိနေကြတာဘဲ။
ဒီကနေ့ ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်အခြေအနေကို ပြည်သူတိုင်း စိတ်ပါဝင်စားနေကြသလို တပ်ထဲက ကျုပ်တို့ စစ်သားတွေလည်း တမျှော်မျှော်ဆိုတာ အသိပေးလိုက်မယ်။ ကျုပ်တို့လည်း ပဒေသာရာဇ် စစ်ကျွန် ဘ၀က လွတ်ချင်တာမှ အရူးတပိုင်းဆိုတာ ပြည်သူတွေ သိစေချင်တယ်။
မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မယ် အသေချာ မတွေးနိုင်။ ဆင်းရဲလိုက်တာမှ လည်း တာတေလံ။
ဒီကြားထဲ အခွန်က ဖိစီး။ ကုန်ဈေးနှုန်းက ဖိစီး။ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်မှုက ဖိစီး။ အာဏာပိုင် အောက်ခြေ အဆင့်ဆင့်က ဖိစီး၊ခွေးကျွန် အတွေးရှိသူတွေက ဒီစာတွေ ဖတ်ပြီး လေထွားတဲ့ ကောင်လို့ ဆိုချင်ဆိုမယ်။ အများပြည်သူရှေ့ လွတ်လပ်တဲ့ စောင့်ကြည့်တဲ့ တရားစီရင်ခွင့်သာ ပေးလိုက်စမ်းပါ။ ငါပြောသလို ဘယ်သူက စစ်သား ပီသ သလဲ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ပြီး ပြိုင်ရဲတယ်။
တကယ်တမ်းသာ ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ စစ်သားမှန်ရင် ပြည်သူ့အနာဂတ်ကို ထိပါးလာတဲ့ လုပ်ရပ် မှန်သမျှကို လက်မခံရဘူး။ ပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ဖိစီးမှုမှန်သမျှကို လက်မခံရဘူး။ ပြည်သူတရပ်လုံးနဲ့ ယှဉ်တဲ့ တရားဥပဒေ ပျက်ယွင်း မိုက်မဲမှု လုပ်ရပ်တွေကို သိနေ မြင်နေ ကြားနေ တွေ့နေပါရက် ခေါင်းလွှဲ မျက်လုံးလွှဲနေရင်………..
ဟေ့ …… ပြည်သူတွေ ချွေးနည်းစာကနေ ပေးတဲ့ အခွန်ငွေနဲ့ စစ်သားရိက္ခာ စစ်သားလစာစားပြီး ပြည်သူလူထုအကျိုးကို မကြည့်တဲ့ ငမိုက်သားတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ပြည်သူ့မျက်နှာ ပြည်သူ့ အနာဂတ်၊ ပြည်သူ့ ခံစားချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ငါ့တကိုယ်အကျိုး ငါ့အခွင့်အရေး၊ ငါ့ရာထူး ဆိုတာကိုပဲ တွက်ချက် တုံ့ဆိုင်း မှုန်မှိုင်းနေအုံးမယ် ဆိုရင် ဒီမှာ ကိုယ့်လူတို့….
ကိုယ့်သခင် ထင်ရာစိုင်းသမျှ နောက်က တကောက်ကောက်လိုက် တဟဲဟဲ ပါးစပ်တဖြဲဖြဲ၊ တနှဲ့နှဲ့ ကောက်သောအမြီး တရှုးရှုးနဲ့ သခင်ညွှန်ရာ အမဲကောင်နောက် ဂမူးရူးထိုး လိုက်ဟောင်တတ်တဲ့ အမဲလိုက် ခွေးတွေ မြင်ဖူးသလား။ တွေးကြည့်စမ်း။
သူတို့က သူ့သခင် ကျွေးမယ့် အမဲတစ်တုံး အရိုးတစ်ချောင်းကိုပဲ မြင်တတ်ကြတာ။ အရိုးတစ်ချောင်း အသား တစ်တုံးနဲ့ သဏ္ဍာန်တူတဲ့ ကားပါမစ် တစ်ခု တဆင့်တိုး ရာထူးလေး တစ်နေရာ။ မြေကွက်ပါမစ် ဖုန်းပါမစ်လေး တစ်စောင်၊ ဘဏ်စုငွေ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေး ပြန်ထုတ်ခွင့် ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေး ၊ခွေးလှေးဖုံ လောက် ခံစားခွင့်လေး မက်လုံးပေးလို့ ကိုယ်ကတော့ လေးချောင်းထောက်ရတဲ့ ဘ၀မျိုး ပြောင်း မသွားစေနဲ့ဟေ့ …
ဒီမယ်…. ဒီစကားပြောနေတဲ့ကျုပ်…. အရပ်သား မဟုတ်ဘူး။ စစ်ဝတ်ယူနီဖေါင်းကို စမတ်ကျကျဝတ်။ ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး ပြည်သူ့ ကောင်းကျိုးအတွက်ဆို အရာရာ တွေးကြံပြုမူဖို့ အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်း တစ်ယောက်ပဲ။
စစ်သားဆိုတာ ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတာဝန်၊ ဒီအတွက်ဆို အသက်ကို ရဲရဲစွန့်နိုင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူမှ စစ်သားဖြစ်တယ်။ စစ်သား စစ်မယ်။ စစ်သားလို့ ကြွေးကြော်နိုင်တယ်။
အခု ငါပြောနေတာကလည်း ပြည်သူ့အကျိုး နိုင်ငံ့ အကျိုးအတွက်ပဲ ဖြစ်လို့ ငါ စစ်သားစိတ်နဲ့ ပြောမယ်။ ငါတို့ စစ်သားတွေ စစ်ကျွန်မဟုတ်ဘူး။ စစ်ခွေးလို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ ခိုင်းရာလုပ် ဘ၀က ရုန်းထွက်ကြ….
ငါတို့ စစ်သားဆိုတာ ပြည်သူပေးတဲ့ အခွန်ငွေ လစာကို စား၊ ပြည်သူအကျိုးကို ဆောင်ပါမယ်၊ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပါမယ်လို့ နေ့စဉ် သစ္စာတွေ ရွတ်နေရတာ။ သစ္စာတည်အောင် ကြိုးပမ်းဖို့ လိုတယ်။ ကတိတည်အောင် လုပ်ကြဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် သစ္စာစူးလိမ့်မယ်။ သစ္စာစူးမှာ မကြောက် ငရဲချိုးကပ်မှာ မကြောက် သခင်အလို တစ်ခုသာ ကြည့်ပြီး ဘယ်သူ့ ကိုက်ရကိုက်ရ ဘယ်သူ့ကို ပစ်သတ်ရ သတ်ရ လုပ်နေ သတ်နေတဲ့ လက်ရဲဇက်ရဲ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင် မှန်သမျှကို ပြည်သူ့စစ်သား စစ်စစ်တွေက တိုက်ထုတ်ရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။
လက်နက်မဲ့ အကြမ်းမဖက် ကျောင်းသား၊ ရဟန်း၊ လူထု ပြည်သူကို သွေးအေးအေးနဲ့ ပစ်သတ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ အမိန့်ပေး စေခိုင်းသူတွေ အားလုံးဟာ ပြည်သူ့ ရန်သူပဲ။ ပြည်သူ့ စစ်သားတို့ရဲ့  ရန်သူပဲလို့ ငါတို့ ခံယူတယ်။ ယုံကြည်တယ်။
ငါတို့ နိုင်ငံ ဒီကနေ့ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ။ ငါတို့ မြင်အောင် ကြည့်ကြရမယ်။ သိအောင် ကျင့်ကြရမယ်။
တရားမျှတမှုဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကို ငါတို့ ဘယ်လို နားလည်ခံယူရမှာလဲ။ ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမှာလဲ။ သိသိကြီးနဲ့ ဗြောင်ကျကျကြီး အလိမ်ခံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လူ့သမိုင်းစဉ်ကို ဒို့မြန်မာ တိုင်းရင်းသားတွေ ရေးခဲ့ကြမှာလား။
အလိမ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတာထက် လူလိုသတ္တိ မမွေးရဲခဲ့လို့ မျိုးရိုးနဲ့ချီပြီး အောက်တန်းသိပ်ကျခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်း အမွေဆိုး ကျန်နေခဲ့မှာကိုပဲ သိပ်စိုးထိတ် မိတယ်။
ငါတို့ လူဖြစ်ရင် လူပီသရမယ်။ စစ်သားဖြစ်ရင် စစ်သား ပီသရမယ်။ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို ကိုယ်ကမှ ပီပြင်အောင် မက နိုင်ခဲ့ဖူးဆိုရင် အရိုးတွေ တွန်ချိန်မှ “က” ကြမှာလား၊ သေနှင့်ပြီးတဲ့ ရှေးမြန်မာ သူရဲကောင်းတွေ စိတ်ချ နေနိုင်အောင် ဒို့တွေ မြန်မာ ပီသမှ ရမယ်။ မြန်မာဆိုတာ မျိုးရိုးနဲ့ ချီပြီး သတ္တိ၊ ဗျတ္တိ ရှိခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။
ဒါကို ဒို့ခေတ်ကျမှ ခြေနဲ့ ဖျက်ကြတော့ မှာလား။ စစ်သားတို့ စဉ်းစား။ နိုင်ငံသားတို့ စဉ်းစား။ မျိုးဆက်သစ်တွေ စဉ်းစား။ ဟေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တိုက်နေယုံနဲ့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်မလာဘူး ဆိုတာ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမှု ကူးလူးဆက်သွယ်ရေး၊ စိတ်ဓါတ်ပေါင်းကူး တည်ဆောက်ရေး အတွက် အင်တာနက် ကွန်ယက်ကသာ ယနေ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်နေလို့ ခေတ်အခြေအနေအရ အွန်လိုင်းမှာ ရေးရတာပဲ။ ရေးကို ရေးရမှာဘဲ။
ကျနော် ရန်ကုန်မှာ နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည် မဟုတ်ပါ။ ဒေါ်လာ လက်ဖြန့် တောင်းနေသူလည်း မဟုတ်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး တိုးတက်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဘယ်လို လူမျိုးနဲ့ မဆို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ မျိုးချစ်စစ်သားဟောင်း တစ်ယောက်ပါ။
ပြီးတော့ တပ်မတော်ကို ချစ်တယ်။
အထက်ပါ စာမူအား တင်ပြခဲ့တဲ့ နေ့ရက်ကတော့ Monday, June 15th, 2009 ဖြစ်ပြီး အချိန် 2:00 am မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စာမူရဲ့  အမျိုးအစား ကတော့ တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သဘောအမြင် အယူအဆများကို ပေးသွားလို့ ရပါတယ်။ ယခုလို အားပေး ကြည့်ရှုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ကhttp://www.photayokeking.org/ ကိုဖိုးတရုပ် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကူးယူတင်ပြပါတယ်
၀ါရှင်တန်ရောက် မြန်မာ အတိုက်ခံ နှစ်ဦး ဘာတွေလုပ်နေကြလည်းဆိုတာကို ဤနေရာမှ သတင်းဖြန့် ရန်လေ့လာနေပါသည်။
သန်းရွှေ ရဲ့ စစ်သောင်းကျန်းသူတွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေပေါ့
ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ခ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်
Labels: ဖတ်ရန် ကဗျာ
တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ် (ပေးစာ) သို့ယုတ်မာတဲ့နွား အ ဖ အကြံ
ကျနော် ဘလော့ကို အမြဲဖတ်ရှုအားပေးနေသူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)
ရက်လောက်က ကျနော်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးအရ ရင်းနှီးတဲ့ အရာရှိစစ်ဗိုလ်တယောက်ဆီက
အလွန်ကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့ သတင်းတခု ကြား ရပါတယ်။ သူက
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဋ္ဌာန (MoEP-2) ၀န်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ဆီက ကြားရတဲ့သတင်းက ဒီလိုပါ။ ကျနော်တို့အချင်းချင်း ဆိတ်ငြိမ်တဲ့
ဘီယာဆိုင်တခုမှာ ဆုံဖြစ်ကြတာမျိုး ရှိတယ်။ (အမှန်ကတော့
တံစို့လက်ဆောင်ပေးဖို့ ကိစ္စတွေအတွက် တရားဝင် တွေ့ဆုံကြတဲ့ သဘောပါပဲ)။
ထုံး စံအတိုင်း ကျနော်တို့အုပ်စု တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ သူ့ကို စ နောက်ရင်း
ရန်ကုန်မှာ လျှပ်စစ်မီး ကြောက်ခမန်းလိလိ ပြတ်တောက်နေတဲ့အကြောင်း
ဝေဖန်ပြောဆိုဖြစ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံး MoEP-2 ကို အပြစ်ဖို့ ပြောဆို
ကြတယ်။ စ နောက် ပြောဆိုလို့ (၂) နာရီလောက်ကြာတော့ သူသောက်တာ
များသွားပြီး လုံးဝမဟန်နိုင်တော့ ဘူး။ အဲဒီမှာတင် (ထန်းရည်မူးလို့
ကျွဲခိုးပေါ်ဆိုသလို) လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ သတင်းကို
သူပြောပြတာကတော့ စစ်အုပ်စုက ရန်ကုန်မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ လည်ပတ်တဲ့
လျှပ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတ ခုကို ၂၀၀၉ မတ်လကတည်းက တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပြီတဲ့
(နေရာတော့မကျိန်းသေဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အထင် အလုံက စက်ရုံကို သူ
ရည်ညွှန်းပုံရတယ်) ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းတွေကနေ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်
လိုင်းတွေနဲ့ဆက်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာတဲ့။ စပြီး လည်ပတ်ဖို့ MoEP ရဲ့
သူပြောပုံအရ အဲဒီစက်ရုံကနေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နှုန်းက
ရန်ကုန်မြို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ် သုံးစွဲမှု စုစုပေါင်းပမာဏထက်တောင်
ပိုသေးတယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်အုပ်စုက အခုအထိ လည်ပတ်မိန့် မပေး သေးဘူးတဲ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့နိုင်မလား မနိုင်ဘူးလား
သိချင်နေတယ်တဲ့ (ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးမှာကို
အရမ်းကြောက်နေတယ်။ သူတို့ အခု အပေါ်စီးကနေ ထိန်း ချုပ်ထားနိုင်တာတောင်မှ
အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် သူတို့လူတွေ အပါအ၀င် ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်
သက်ပြီး အခုအထိ ယုံကြည်မှု မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်)။
တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးကို စပြီး လည်ပတ်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့်
သူတို့မှာ ကြောက်စရာကောင်း တဲ့ အစီအစဉ် ဆွဲထားတယ်။ တကယ်လို့
ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ရှုံးခဲ့ရင် မတော်တဆဖြစ်တယ်လို့ အကြောင်း ပြပြီး
ဆောက်ထားတဲ့ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ်တဲ့။ တခုလုံးကို
ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် အစိုးရသစ်အတွက် နောက်ထပ် ၅ နှစ်လောက်
ဒါဟာ စစ်အုပ်စုဆီက ကျနော်တို့ အမြဲကြားရလေ့ရှိတဲ့ TERRORIST ACT ဆိုတာထက်
ဆိုးတဲ့ TERRIBLE IDEA ပါပဲ။ တကယ့်ကို ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ အကြံအစည်ပါပဲ။
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ မီးစက်တွေက ထွက်တဲ့ ဆူ ညံသံတွေ၊ မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့
မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် မီးမှောင်ကျနေတဲ့ ညတွေကို မဖြတ်သန်းဖူးဘူးဆို
ရင် ဒီ(လျှပ်စစ်)ဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အသည်းအသန် ဖြစ်နေရသလဲ၊ ရန်ကုန်နေ
ပြည်သူတွေအတွက် ဘာကြောင့် အရေးတကြီးကိစ္စ ဖြစ်နေရတာသလဲ ဆိုတာကို
အိမ်အသုံးစရိတ်ရဲ့ အနည်းဆုံး ၄ ပုံ ၁ ပုံလောက်ဟာ မီးစက်နှိုးဖို့
၀ယ်ထည့်ရတဲ့ ဒီဇယ်ဖိုးထဲ ပါကုန်ရော။ မီး ပြတ်လို့ မီးမရှိလို့ ရေမရှိလို့
ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေ၊ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကတော့ မဖော်ပြနိုင်လောက် အောင်
ရန်ကုန်နဲ့ အဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းရှိသူများ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆိုင်ရာပိုင်ရာကတဆင့်
စုံးစမ်းကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။ ကျနော်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မဖော်ပြ
နိုင်တာကိုတော့ နာလည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, June 14, 20090comments
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးထားသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များအား ခြံစောင့်တပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် နွား-အ-ဖ ဖိအားပေး
ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၀၉။.........စံခလပူရီ(မေ- ၁၃)။ ။ လွန်ခဲ့သော ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့၌ မော်လမြိုင်မြို့ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီး နိုင်ထောမွန် အပါအဝင် ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၅ ဦးနှင့် ရတခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတပ်ဖွဲ့များ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲရေးကို ပြန်လည်စဉ်းစားစေလိုကြောင်း တိုင်းမှူးကပြောကြားခဲ့သည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ဗဟိုနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သိရသည်။